Hlola iBahrain - World Tourism Portal
Okufanele ukubone eBahrain. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eBahrain.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBahrain
Bukela ividiyo ngeBahrain
UMbuso weBahrain. Hlola i-Bahrain isiqhingi esiseMiddle East ePersian Gulf, esiboshwe ephaketheni lolwandle olwahlanganiswa yi-Saudi Arabia ne-Qatar futhi lusondele nase I-United Arab Emirates. Kuyisimo senkululeko yenkululeko yezenhlalo - noma okungenani ukumelana okunobungani baseNtshonalanga - phakathi kwamazwe amaSulumane aleso sifunda. Kuyathandwa ngabahambi nge "Arabhu" yabo eyiqiniso kodwa ngaphandle kokusebenzisa okuqinile komthetho wamaSulumane kokuncinyane kwabo okungewona amaSulumane.
I-Bahrain iyizwe elincane kunazo zonke e-GCC, futhi imvamisa kudingeke ukuthi ihambe ngesitebele sezomnotho umaqondana nomakhelwane bayo abakhulu. Izwe linokugcotshwa okumbalwa kawoyela, kepha lizisungule njengendawo yokuhlaziya kanye nebhange laphesheya, ngenkathi futhi lizuza ubukhosi obukhululekile (ngokwezindinganiso zeGulf okungenani). Umnotho wayo uncike kancane kuSaudis othakazelela ukuzijabulisa okuncane, ongatholakali eMbusweni WamaSulumane oqinile weSaudi Arabia.
I-Bahrain inezimo zezulu zasogwadule ezishisayo, kodwa ngenxa yokuvuselelwa komhlaba inamabhishi ambalwa kakhulu. Amabhishi enziwe umuntu emahhotela okunethezeka amahle, kodwa atholakala ngentengo kuphela.
Manama - Inhlokodolobha yaseBahrain.
Iziqhingi zaseHawar - ngasogwini lweQatar, lezi ziqhingi zithandwa kakhulu ngababizi bezinyoni
Isikhumulo sezindiza i-Bahrain International eMuharraq empumalanga neManama, siyisisekelo esikhulu se-Gulf Air futhi sinokuxhumana okuhle okuvela eMiddle East, e-Indian subcontinent naseNyakatho naseMpumalanga Afrika, ngaphezu kwensiza ekude Amsterdam, Athens, Bangkok, Frankfurt, London, Manila, Moscow futhi Paris. Isikhumulo sezindiza sinokuthenga okungekho mahhala kulabo abafuna izindiza.
Arabic Ulimi olusemthethweni. I-Bahraini Arabic ilulimi olukhulunywa kakhulu olimini lwesi-Arabhu, yize lokhu kuhluke kancane kwesi-Arabhu esivamile.
IsiNgisi sikhulunywa kabanzi ngeBahrainis yeminyaka yonke, futhi silulimi oluyimpoqo lwesibili kuzo zonke izikole.
Phakathi kwabantu baseBahraini nabangewona amaBahraini, abantu abaningi bakhuluma isiPersia noma isi-Urdu. INepali nayo ikhulunywa kabanzi endaweni yabasebenzi baseNepalese kanye nomphakathi wamaSosha eGurkha. IsiMalayalam, isiTamil kanye nesiHindi zikhulunywa phakathi kwemiphakathi ebalulekile yamaNdiya.
I-Qala'at al-Bahrain (Bahrain Fort) isogwini olusenyakatho futhi ihamba ngemizuzu emihlanu kuya kweyishumi ukusuka lapho Manama idolobha, eKarbabad. Iyabuyiselwa futhi isesimweni esihle yize ingenayo ifenisha, izibonakaliso, noma imibukiso. Ukungeniswa kumahhala futhi kuvulekile nsuku zonke i-8am-6pm.
Eduze kwale nqaba kukhona imnyuziyamu, equkethe izinto eziningi zobuciko ezisuselwa ezikhathini zasendulo zeDilmun ngezikhathi zamaSulumane, eziningi zazo ezazitholakala ezinqabeni nasemanxiweni ongeziwe oseduze. Imnyuziyamu iyisakhiwo esikhulu esingunxande futhi esimhlophe esingenazo izimpawu zokubonisa ukuthi ingumnyuziyamu. Amahora yi-8AM-8PM ngoLwesibili-Sun;
I-Abu Mahir Fortis etholakala eMuharraq futhi yaziwa nangokuthi iMuharraq Fort. Yakhelwe phezu kwezisekelo zenqaba yakudala futhi yayisendaweni yokuvikela izindlela zasentshonalanga.
I-Arad Fort. Ukusuka ngekhulu le-16th, le nqaba yakhiwa ama-Arabhu - ngaphambi kokubanjwa amaPutukezi e1559. Yaphinde yaphindwa futhi ngabakwa-Omanis e1635. Ibuyiselwe futhi manje isingatha imicimbi yesiko. Vula iSun-Wed 7am-2pm, uLwesine neSat 9am-6pm.
I-Sheikh Salman bin Ahmad Al Fateh Fortis etholakala eRiffa, ibheke isigodi saseHunanaiya maphakathi nesiqhingi. Vula iSun-Wed 8am-2pm, iThur & Sat 9am-6pm, Fri 3pm-6pm.
I-Al Oraifi Museumin Muharraq (ubuciko besikhathi se-Dilmun),
UBeit al Quranin Hoora (iqoqo elingajwayelekile lemibhalo yesandla yamaSulumane),
I-Bahrain National Museumon the Al Fateh Corniche, Manama,
Kwezezimali Museumin Indawo Yobumbano (i-Bahraini coinage)
U-Olexander Sakhir wamafutha (umlando wemboni yamafutha endawo). Isibonelo, lesi sigcinamlando sikhombisa ukuthi ungawathola kanjani amafutha e-Bahrain nokunye.
Isimo sezulu esifudumele sonyaka wonke sisho ukuthi amanzi afudumele kakhulu, ngisho nesikhathi sasebusika, lapho amazinga okushisa apholile kungenzeka. Amanzi ayaziwa ngokuba nokuzola okukhulu nangokucacile.
I-Bahrain ibuye ibe nesethi yezindawo zokungcwaba ezingaphawuleki kahle. Lezi zingosi ezibanzi, ezivame ukumbozwa kakhulu yizindawo zokungcwaba, zingatholakala lapho
I-A'ali (indawo yamathuna enkulu kunazo zonke emhlabeni),
Izinga lokushisa eliphakeme eBahrain lenza ukuthi imisebenzi yolwandle ibonakale ilinga futhi imidlalo yezamanzi ithandwa kakhulu eBahrain, futhi izivakashi nabantu bendawo bezitika ngemidlalo yabo yokuzikhethela unyaka wonke emanzini afudumele ePersian Gulf. Ukuhamba ngomkhumbi ngomkhumbi nangomkhumbi kudume kakhulu.
Yize iyizwe eliwugwadule, iBahrain inenkundla yokudlala igalofu ye-18-hole global, cishe imizuzu eyi-15 ngaphandle kwenhloko-dolobha, iManama. Umncintiswano we-par 72 ubeka amachibi ayisihlanu futhi ugcotshwe ngamakhulu amasundu ezinsuku namathafa asogwadule.
Kujabulele ukugibela ikamela emgaqweni omkhulu.
Vakashela iRoyal Camel Farm
Thenga izikhumbuzo futhi uthenge obumbi obuyiqiniso e-A'ali Village Pottery.
Kunezitolo ezinkulu eBahrain ezinikeza izitolo zamalebula zomhlaba wonke kanye nokunethezeka, izitolo ezinkulu nokunye, kanye nezinkantolo zokudla, ikhefi zanamuhla nezendabuko, izindawo zokudlala nezindawo zokudla, amasinema (i-3D & 2D) kanye namanzi asemnyango ipaki.
Ukuvakashela i-souq yasendaweni kumele. Lapho ungaxoxa ngentengo ngezindwangu ezilula, igolide elidumile laseBahrain, kanye nezinye izipho eziningi. I-souq futhi iyikhaya labanikazi abaningi abahle kakhulu. Uma ulapho isikhathi eside ngokwanele (yisho ngeviki) ungathatha into oyithandayo yokugqoka bese "bayoyilolonga" ngokunembile kunoma yikuphi ukwaziswa okhetha kusuka ebangeni elikhulu olutholakalayo.
I-Bahrain inendawo yokudlela ekhangayo, enezindawo zokudlela eziningi ongakhetha kuzo. Izindawo zokudlela zase-Bahrain zisebenzisa i-gamut yezitolo ezishibhile ezihlinzeka ngokudla kwasendaweni ezindaweni zokudlela ezifashisayo emahhotela ajwayelekile. Ukudla okusheshayo okusendaweni okwaziwa kakhulu ngeJasmi's (Kufanele uzame). Ama-franchise asheshayo wokudla aseMelika afana neBurger King namaMcDonald's ayatholakala, kanye neTexas Chicken. Ukudla kwase-Western (ikakhulukazi kwaseMelika) isitayela nokudla kungatholakala ezitolo ezinkulu naphakathi enkabeni yedolobha, okunikeza ukudla ngamanani entengo aphakathi aphezulu. Ukudla okujwayelekile okusheshayo njenge-KFC, iMcDonald's, iPapa johns, indlovukazi yobisi, njll. Kungatholakala emigwaqweni kuwo wonke amadolobha. Ezinye izindawo zokudlela azitholakali Manama kepha kwezinye izindawo. Amanani ezitsha anengqondo, ngakho-ke kunamakhasimende amaningi aphindaphindwayo.
Ngaphansi komthetho weBahraini, noma isiphi isibonakaliso sokuphuza utshwala singathathwa njengobufakazi bokuqala bokushayela ngaphansi kwethonya, okungaholela ekuboshweni kanye / noma inhlawulo. Kodwa-ke, utshwala buthengiswa ngokusemthethweni ezindaweni zokudlela ezahlukahlukene (ezindaweni ezithile), amahhotela, imigoqo nasezindlini zobusuku.
Izinga lobugebengu obujwayelekile bomphakathi eBahrain liphansi futhi ubugebengu obunobudlova buyaqabukela. Kodwa-ke, ukweba, ukweba okuncane, kanye nokuphanga kwenzeka ..
Phuza amanzi amaningi. Ngo-Ephreli kuze kube ngu-Agasti kungashisa kakhulu (kuze kufike ku-50 ºC) futhi kunomswakama. Sebenzisa isambulela ukuvikela elangeni elinokhahlo. Kubalulekile ukuhlala u-hydrate, ikakhulukazi uma ungaphandle phakathi nosuku. Amanzi asemabhodleleni athengiswa cishe kuyo yonke indawo edolobheni kusuka ku- “Cold Stores” kanye nezindawo zokudlela ezincane ngamanani afanele. Kuse-Souk, abathengisi abahamba ngezinyawo banikela ngamabhodlela amancane e-chilled kodwa ungagcina ukhokha okungaphezulu kokuthi ibhodlela likufanele impela. Uma uhlala eBahrain isikhathi eside, ungahlela ukuhlelelwa kweCold Store yangomakhelwane ukuletha amanzi asemabhodleleni efulethini lakho, noma ubhalise ukulethwa kwamanzi ezinkampanini eziningana esiqhingini. Amanzi esiqhingini awekholeki, kepha akanconyeliswa ukuphuza ngenxa yenani lamagciwane kanye nokuqukethwe okunamaminerali okusindayo.
I-Bahrain iyizwe eliziphethe kahle elinomusa kodwa kubalulekile ukukhombisa inhlonipho nokuhlonipha ngokubhekisele kumasiko abo nakwinkolo yabo ngaso sonke isikhathi. Lapho ngaphandle ezindaweni lapho ama-Arabhu endawo etholakala khona kungakuhle ukuthi ugqoke ibhulukwe elide, noma izikhindi, futhi abesifazane akufanele bagqoke ingubo yokubona. Kodwa-ke, emaklabhini asolwandle namahhotela, ama-swichiuits, ama-bikinis nama-shorts alungile ukugqokwa. Ungakhombisi izimpawu zothando kumalungu wobulili obuhlukile obala. Abantu bobulili obuhlukile baboshelwe ukuqabulana emphakathini futhi nje akwamukelwa emphakathini.
Hlola iBahrain futhi ugcine engqondweni ukugwema noma ikuphi ukuxabana futhi ungalokothi uhlanganyele empikiswaneni, ikakhulukazi ngeyendawo.
I-Qal'at al-Bahrain - Isikhumulo Semikhumbi Esidala Nenhlokodolobha yaseDilmun
I-Pearling, Ubufakazi Bomnotho Esiqhingi
Dilmun Burial Mound